Dawladda iyo mucaaradka oo guryo l´aanta ka shiraya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda iyo mucaaradka oo guryo l´aanta ka shiraya
La daabacay fredag 29 januari 2016 kl 10.41
Dalkaan Iswiidhan ayaa waxaa la qorsheynayaa in laga dhiso guryo gaaraya ilaa iyo 70 000 oo gurya cusub ah taas oo la dhisayo ilaa iyo sanadka 2025-ka ,sidaas daraadeed waxaa la filayaa in gurya dhisidda dalkaani uu aad iyo aad kor ugu kaco.
Ilaa iyo inta taariikhdaas laga gaarayo waxaa dalkaan ka jiri doona gurya la’aan xoog leh sidaas daraadeed ayaa hey’adda guriyeynta dalkaani waxay rabtaa in si deg deg ah dalkaan looga dhiso gurya cusub.
Hey’adda guriyeynta ayaa la sheegey in ay deyrtii hore dawladda u gudbisey talooyin la xiriira in guryo loo dhiso dadka dakhliga soo galaa yar yahay sida tusaale ahaan qaxootia cusub oo dhawaanahaan dalkaan soo galey.
Dawladda ayaa rabta in ay mushkiladdaas xal u raadiso,xisbiyada mucaaradkana arrintaas kala shirto maalinta isniinta ee soo socota.
Peter Karpestam waa khabiir ka hawlgala hay’adda guriyeynta:
-Arrinta gurya la’aantu xaal aad iyo aad u xun ayey mareysaa ,waxaanuna oran karnaa dadkii oo si xoog leh u soo batey iyo waliba guryo la’aanta oo si xoog dalkaan uga jirtey ka hor xata intii aysan imaan qaxootigaan cusub.